Iran: Hiran’ny Fahafahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2012 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Ελληνικά, Español, বাংলা, 繁體中文, 日本語, English
Tamin'ny 2009, nanohana ny Hetsika Maitso tany Iran tamin'ny alalan'ny asa kantony ireo mpanakanto erak'izao tontolo izao , noho ny fifanandrinan'ireo mpanohitra tamin'ny fitondrana Islamika momba ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena. Telo taona taty aoriana ny United4Iran, fikambanana iray tsy mitady tombontsoa manao fampielezan-kevitra momba ny zon'olombelona any Iran, dia manao dingana miaraka amina rakikira ao anaty aterineto voatokana hamelona indray ny fanantenana hisian'ny fahalalahana miteny ho an'ireo Iraniana.
Firouzeh Mahmoudi, mpanangana ny United4Iran dia milaza amin'ny Global Voices:
Nofidiany ny rakikira “Azadi: Songs of Freedom for Iran” (Hiran'ny Fhafahan'i Iran), izay nanana ny hafatra nilainay – izay niresaka momba ny ady ho an'ny zon'olombelona sy ny demokrasia any Iran sy erak'izao tontolo izao. Miasa amin'ny alalan'ny fomba fijery izahay hoe olana eran-tany ny ady ho an'ny zon'olombelona, ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny, ary ny firahalahiana no fitaovana tsara indrindra entinay manatanteraka izany. Amin'izany fisainana izany, nikaroka mpanakanto tsy Iraniana ihany koa izahay, izay nahitana ireo avy any Ejipta, Palestina, Iraka, Afrika Atsimo, Etazonia, sns
Afaka mihaino ireo hira rehetra eto ianao.
Milaza i Firouzeh:
Miteny amin'ny fo ny hira, ary matetika ny fihetseham-po no mampihetsika ny olona hanao zavatra iray… tanatin'ireo 36 ora voalohany namoahana izany ny 12 Jona, nanana mpitsidika maherin'ny 8.000 izahay tao amin'ny azadimusic.bandcamp.com ary maherin'ny 9.400 ny fitambaran'ny fihainoana ireo hira ireo.